विद्रोहीकी आमा – मझेरी डट कम
म बेला–बेलामा आफ्ना विगत खोतल्ने गर्छु । र पनि, म कहाँ, कहिले र कसरी हुर्कें भन्ने अँझै भेउ पाउन सक्दिनँ । कहिले काठमाडौँमा हुन्थेँ, कहिले चितवनमा अनि कहिले तनहुँको सिम्पानीमा । मेरा संस्मरणमा घटनाहरू छन् तर घटनाक्रम जेलिएका छन् । सायद त्यतिखेर स्मृतिमा फाइल सेभ गर्दा मिति राख्ने चलन थिएन । हजुरआमासँगका संस्मरण विशेष छन् । र पनि, ती समयक्रमसँग नारिन सकेका छैनन् ।
हामी हजुरआमालाई आँवै भन्ने गर्थ्यौं । आँवैलाई सम्झँदा एउटा बिरालो र उसका बच्चा पनि सधैँ टाँसिएर आउँछन् । सायद ती बिरालाका कारण त्यतिखेरै मेरो आँवैसँगको लाक्षणिक जम्काभेट भएकाले हुन सक्छ ।
म हुर्कने बेलासम्म आँवै देवघाट लागिसक्नुभएको थियो । मेरा लागि मेरी आँवै फोसिल र सिपी अनि छाल बोकेर ल्याउने तीर्थयात्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर तीर्थयात्रामा ठूलै टोली जाने गर्थ्यो । फेरि गाउँ फर्केर आउन पाउने/नपाउने ठेगान नभएकाले सबै जना बिदावारी भएर जाने चलन थियो रे ! धेरै जनाको तीर्थयात्राकै क्रममा मृत्यु पनि हुने गर्थ्यो र मेरी एक हजुरआमाको हैजाका कारण तीर्थयात्रामै देहावसान भएको थियो । मेरी आँवैको तीर्थयात्रा गया, बनारस, अयोध्या, उत्तराखण्डका चारधाम, द्वारका, जगन्नाथ, पुरी, तिरुपति बालाजीदेखि कन्याकुमारीसम्म भएको थियो । अहिलेसम्म पनि हामी हजुरआमाले त्यतिखेर बोकेर ल्याएका तिरुपति (बेंकटेश्वर) भगवान्का छायाचित्रको पूजा गर्छौं ।
मन्त्री क्वार्टरमा हामी छँदा म सधैँ आँवैले पकाएको चोखो भात र तिहुन खान जान्थेँ । गिलो भात, झोल तरकारी, घिउ र तुलसी आँवैको विशेषता थियो । मलाई निकै मन पर्थ्यो । आँवैले गर्ने अंकमाल म अँझै सम्झन्छु । म नातिनातिनामा उहाँको सबैभन्दा प्यारो हुँ भन्ने मलाई गर्व थियो । मेरी दिदी र म आँवैसँग भजन पनि गाउने गर्थ्यौं । भजनको बोल यस्तो थियो :
पछि हामी बत्तीसपुतली छाडेर बानेश्वर बस्न थाल्यौँ । नातिको व्रतवन्ध नगरी भएन भनेपछि ०३९ सालमा मेरो व्रतवन्ध तय भयो । मुग्लिनसम्म हामी बसमा गयौँ । त्यतिखेर मुग्लिन–नारायणघाट खण्ड चिनियाँहरूले बनाइरहेका थिए । करिब १४ किलोमीटरसम्म हामी डम्फरमा गयौँ ।
तनहुँसुरका दलसुर राना हजुरबा र आँवैकहाँ आए र बाटोबाटै बाबालाई छुटाएर ल्याउने जिद्दी गर्न थाले । यसबारे हावासरी सन्देश फैलियो अनि गाउँगाउँबाट मानिस जम्मा भएर बन्दीपुर जुलुस लाग्यो । हुन त मेरो बाबालाई भोलिपल्टै पोखरा लगिएको रहेछ तर त्यो कसैलाई थाहा भएन । त्यस जुलुसमा महिलाको नेतृत्व आँवैले गर्नुभयो । बन्दीपुरमा हजारौँ जम्मा हुन थाले । बजारतिर बन्दुक तेस्र्याएर सिपाही ब्यारेकको सुरक्षामा थिए भने बजारमा दिनदिनै नारा लाग्ने गर्थ्यो रे ! माघे संक्रान्तिका दिन १०/१५ जना क्रान्तिकारी युवा आइपुगेछन् र सिपाहीको बन्दुक खोस्न अघि बढेछन् । होस गुम भएपछि सेनाले टाउकोमा ताकेरै गोली चलाएछन् । ६ जना खड्गदेवी थानअगाडि नै ढलेछन् । आधा घन्टासम्म गोलावारी हुँदा सबै तितरवितर भए र बजार नै सुनसान भएछ । बन्दीपुर बजारमा गोलीले छाना प्वाल नपरेका वा गारोका पाप्रा नउक्केका कुनै घर रहेनछन् ।
गोलीको वर्षा हुँदा पनि धोती–सारी च्यातेर रक्ताम्य भएका विद्रोहीको उपचार गर्ने आँवैजस्ता साहसी महिला उतिखेर पनिरहेछन् । अनि, आँवै जब तल आउनुभयो, उहाँले सिँढीमा एउटा रक्ताम्य बच्चा देख्नु भएछ । पछि त बच्चा आफ्नै कान्छो छोरा पो रहेछ ! घाइते बच्चा लिएर गाउँ फर्किने कुरो नभएकाले आँवै केही दिन टौवामुनि बास बस्नु परेछ ।
मैले सम्झने आँवैका विभिन्न तस्वीर छन्, कुनै आफैँले भोगेका, कुनै सुनेका, कुनै पढेका । यी सबै तस्वीर मेरो स्मृतिपटलमा जेलिएर बसेका छन् फौदारकी बहिनी, विद्रोहीकी आमा, क्रान्तिकारी महिला, बुइँगलको फोसिल, भक्तिनी वैष्णव र मेरी आँवै । अँझ धेरै स्वरूप त मैले थाहै पाइनँ । तैपनि, मलाई उहाँको अँगालो र वैष्णव भोजनबाटै सन्तुष्टि मिल्छ अनि कताकता गर्व पनि महसुस हुन्छ ।